Drum okpomọkụ, Silicone okpomọkụ, katrij okpomọkụ, mkpuchi Jaketị - Pamaens
Ịchekwa ume, na-amalite ebe a
email Nkwado beth@pamaens.com
Mkpuchi Jacket maka Band okpomọkụ (okpomọkụ Jacket)
Mkpuchi Jacket maka Ọkụ na tank chernobyl
Mkpuchi Jacket maka valvụ & Ọkpọkọ & Flange
Ahaziri mkpuchi Jaketị
Energy Azọpụta okpomọkụ
Energy Azọpụta Nano okpomọkụ
Energy Azọpụta itinye n'ọkwa okpomọkụ
Ahaziri kpo oku jaket / blanket
Silicone roba okpomọkụ
Silicone okpomọkụ na nrapado
eriri igwe Heaters
Efere Band Heate
Mica Band okpomọkụ
Igba Band okpomọkụ
Igba aluminum gbalaga okpomọkụ
Igba ọla gbalaga okpomọkụ
Mica Heating efere
Efere kpo oku efere
Igba kpo oku efere
Carbon Fiber okpomọkụ
Infrared Efere okpomọkụ
J ụdị thermocouple
K ụdị Thermocouple
Pin ụdị thermocouple
Heating & mkpuchi ngwọta, dị nnọọ ka ị
Shanghai PAMAENS Technology CO., LTD specializes ke R & D, mmepụta na ahịa nke ike na-azọpụta kpo oku na mkpuchi na ngwaahịa. PAMAENS enye echichi, ọzụzụ na mgbe-ire onye-nkwụsị ọrụ. PAMAENS aghọwo onye ndú na ubi nke ngwa maka ulo oru ike na-azọpụta kpo oku technology na China na ná mba ọzọ.
Anyị isi ngwaahịa na-gụnyere mkpuchi Jaketị, tank & drum heaters, infrared heaters, katrij heaters, eriri igwe heaters, tubular heaters, seramiiki gbalaga okpomọkụ, mica gbalaga okpomọkụ, igba-na okpomọkụ, ikuku mma okpomọkụ na mmiri mma gbalaga heaters wdg
PAMAENS kpatarari ISO9001 OA na RoHS asambodo. Ọ na-emetụta ike ule na-achịkwa ọ bụla otu akụkụ nke ngwaahịa nakwa dị ka ọ bụla nhazi nzọụkwụ. The ngwaahịa na-ere ka Europe, American, Middle East, South Eastern Asian, Australia, Japan, Russia wdg
PAMAENS nwere ike àgwà akara usoro na ihe onwunwe sourcing, n'ichepụta nhazi, na ngwaahịa ule. Anyị na-esi ọnwụ na iji elu mma akụrụngwa na inyocha ihe nile anyị ga-eji.
Anyị ụlọ ọrụ PAMAENS, nwere ISO 9001, OA asambodo na RoHS asambodo n'ihi ọtụtụ n'ime anyị na ngwaahịa.
Ọrụ anyị, PAMAENS, bụghị naanị a na-emeputa, anyị na-mmebe na Mmepụta. Anyị na-amalite inye kpo oku ngwọta maka plastic usoro ọrụ kemgbe 2005, na 2012, anyị na-amalite inye ume ịzọpụta ngwọta n'ihi na elu ike na-ewe plastic ụlọ ọrụ.